Wimbledon 2021 Preview - Stake blog - jluis37.com
Dịka oge ịgba egwu tenis nke 2020-2021 na-aga n’ihu, anyị gafere ugbu a n’ụlọ ikpe ahihia iji chọta onye mmeri ọzọ anyị ga-enweta. Wimbledon 2021 ga-abụ asọmpi mmadụ niile chọsiri ike, ma merie ya otu. Na-ewere ọnọdụ na anwụ na-acha na Wimbledon, UK, ahịhịa dị egwu bụ otu n’ime njem nleta kachasị ama n’ụwa. Na-egosipụta ọmarịcha na klaasị, uwe niile na-acha ọcha na ebe a na-acha ahịhịa ndụ na-eme ka egwuregwu tennis mara mma. Akụkọ banyere Roger Federer ejirila akụkọ ihe mere eme mee maka afọ 20 gara aga. Eze ahịhịa dị ka ọtụtụ ndị chọrọ ịkpọ ya, agbanyeghị, na-adagharị n’asọmpi a yana oge ọgba aghara dị egwu. Nke a megheere mmadụ niile na ndị chọrọ itinye aka na ya. Ahịhịa bụ elu nke gụnyere usoro dị iche iche na ntụgharị. Ozugbo onye ọkpụkpọ na-agba ọsọ ọsọ nke ibiaghachi, yana ntụgharị, ha ga-enwe ahụ iru ala. E nwere nnukwu ọdọ mmiri nke nwere nnukwu égbè iji gbaa ọsọ n’afọ a, na ịpụ Nadal na mmeri ahụ, naanị na-emesi agha ahụ ike.
Onye ozo? Ma Novak Djokovic (1.88 Nsogbu)
E nwere ọtụtụ ihe na-ekwu banyere ihe karịrị ọkacha mmasị nke ahịhịa a slam, na nke ahụ bụ Novak “Nole” Djokovic. Ulo oru ndi Serbia abughi ihe di egwu na oge a. N’ịchọ itinye ya na Wimbledon na-enwe afọ ojuju zuru ezu, ọ nweghị ịkwụsị otu n’ime ndị egwuregwu ahụ. Ndepụta ndepụta aha ya na-eto eto na-eto eto ghọrọ eziokwu na afọ ole na ole gara aga. Novak na-etu ọnụ egwuregwu ụlọ ikpe niile, yana ikike ịtụfu ọbụna ndị agbachi agbachi agbachi. Na ahihia, Novak weghara egwuregwu ya na ọkwa ọzọ, egosila ya na ngwụcha 2018 na 2019. Nole nwere mpempe akwụkwọ, ọrụ aka, ọrụ aka, nkwado azụ, yana ọtụtụ echiche uche ọdụm. Ihe ole na ole nwere ike imebi ya, yana ike ijisi ike na uche ya niile, na-eme ya onye isi ike na-eti aka.
Na-ebili, Na-eme Mmeri – Alexander Zverev (13.50 Nsogbu)
Alexander “Sascha” Zverev bụ otu n’ime egwuregwu kachasị nwee egwuregwu. N’inwe nnukwu ọrụ, na otu n’ime azụmazụ kachasị mma na azụmaahịa a, Zverev nwere ohere ọ bụla na onye ọ bụla na-emegide ya. Agbanyeghị mgba ya, pụtara ìhè n’echiche nke ihe. N’ịbụ onye a maara maka ịbụ igwe na-arụ ọrụ okpukpu abụọ na oge nrụgide, Zverev nwere ọtụtụ adịghị ike na-egbochi ya ịsọ mpi ọzọ maka aha slam. New na Mma Sascha egosiwo akara nke nkwa. N’elu ala a karịsịa, Zverev ga-ele anya iburu egwuregwu ya na ndị iro ya, ma na-achịkwa ma ọrụ ọrụ yana ntọala.
Ehi ụra – Marin Cilic (55.0 Nsogbu)
Marin Cilic na egwuregwu ya niile na-eti mkpu n’ụlọ ikpe ahihia. Ọrụ dị arọ, ịkụda nku abụọ, yana egwuregwu egwuregwu dị ọcha, ha niile bụ ngwa ọgụ dị ike dịka ahịhịa. Na-egosi na emebeghị ya na ATP Stuttgart, Cilic bụ ọnụnọ dị ike na ụlọ ahịhịa. Ọ bụrụ na ndị mmegide amalite iwere ya ka ihe nzuzu, ọ ga-amụnye akara akara ya na ndị mmeri na aces. Ka nká, ma onye nwere ike ihi ụra na Marin Cilic nwere ike iwetara gị akụ na ụba!
Ihe niile ị chọrọ Wimbledon na Tennis ịkụ nzọ ga-alaghachi Stake.com! Jide n’aka na ị ga – eji ahịa ị na – amaghi uru were elele gị, ma zọọ ihe ị na – ahọrọ.